10 Iindawo ezimangalisayo zokuqeshisa ngeholide eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Iindawo ezimangalisayo zokuqeshisa ngeholide eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/06/2021)
Ukuba bucala, 5-amaziko ehotele inkwenkwezi, breathtaking iimboniselo, kunye nendawo, Okulandelayo 10 amabala ayifumene yonke. le 10 iindawo ezimangalisayo zokurenta iholide eYurophu zijikelezwe yindalo emangalisayo kwaye zize nezinto ezintle.
1. Indawo eyoQeshisayo yokuHlala eFrance: Provence
Iindawo zokuhlala zamatye, Villas yamandulo French, intle iDentelles de Montmirail iintaba, Provence yenye 10 iindawo ezininzi eyoyikisayo irente eYurophu.
Okokuqala, Ukuvuka kwi-lavender scents kunye nokukha itsheri emithini yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza eProvence. Okwesibini, Ukuncoma i-Mont Ventoux entle evela kwiifestile zendlu yelizwe lakho kuya kudlula naliphi na iphupha owakha wanalo ngeholide efanelekileyo.
Iindidi zendawo yokuhlala:
KwiProvence, unendawo ezininzi zokuhlala ngeholide: Iindawo zokufama, Villas, kunye nezindlu ezintle. Zonke irente zeholide zixhotyiswe ngokupheleleyo ukuba zibambe iintsapho ezinabantwana, okanye amaqela abahlobo.
ukusuka $136 ye 2 igumbi lokulala ukuya $350 kwilali, ubusuku ngalinye.
2. Indawo egqibeleleyo yokurenta eYurophu e-Itali: Tuscany
Intlambo yewayini yaseTuscan yindawo entle yokurenta e-Itali. Iinduli ezinesilika yindawo entle yokuphumla. Njengokuba, Isiqithi esimangalisayo seGiglio, okanye kumzi woonongendi baseFranciscan eLa Verna, zizinto ezintle ezibuyisiweyo kummandla omhle waseTuscan.
Ngaphezu, ukuvuka ekuseni, ukuphuma kwindlu yasefama yeli lizwe ukuya kwiimbono ezintle zeTuscany – ayixabisi. Apha, unokukhetha ukuphola echibini labucala ngeglasi yewayini, okanye ukhenketho lwewayini.
Iindawo zokuhlala, zokuhlala, kunye nezindlu zokuhlala.
$68 ukuba $200 ubusuku ngalinye.
Imisebenzi yaBantwana: Ngokuqinisekileyo! Ngelixa abantu abadala bezitotosa, abantwana banokudubula kwiigadi zezilwanyana zasePistoia okanye eCavallino Matto Ipaki yokonwabisa in Livorno.
UFlorence waya eGrosseto ngoLoliwe
IPerugia ukuya kwiGrosseto ngoLoliwe
IViterbo ukuya kwiGrosseto ngoLoliwe
IRoma ukuya eGrosseto Ngoololiwe
3. Indawo egqibeleleyo yokurenta e-UK: ENtshona England
Unxweme oluhle, izindlu zamatye, ukutshona kwelanga okuhle, nokuzola, Yenza uMzantsi West eNgilani ube yindawo efanelekileyo yokurenta iholide emaphandleni amaNgesi. Ukwengeza, i iidolophu ezinomtsalane zonxweme I-Devon kunye ne-Dorset bagcine umtsalane wabo kule minyaka kwaye bema ngenkalipho ezandleni zexesha kunye nemimoya enetyuwa.
Ukuhamba ecaleni kweelwandle zegolide, Ukuncoma amatye kaSimon Old Harry, okanye iJurassic Coast, ukubetha Ukuqhekeka kwesixeko nangaliphi na ixesha. Ngelixa ndihlala apha, Uyakuva ukuba uhamba umva ngexesha ukusuka kwixesha langaphambili ukuya kwi 17th ngekhulu. Ukuma komhlaba kukuxelela amabali exesha kunye nenkambo yendalo kule nxalenye yeNgilane, ngelixa izindlu ezifulelwe ngengca okanye zemveli ziya kukuxelela ngobomi nenkcubeko eNtshona England.
ke, ukuba unomdla kwinkcubeko yesiNgesi, gadi, bokwakha, kunye neentsomi – emva koko uyakufumanisa ukuba iNgilani eNtshona ineendawo ezintle zokurenta iholide eYurophu.
$70- 320 ubusuku ngalinye
4. Indawo eNdawo yokuHlala ngeNdawo eSwitzerland: I Swiss Alps
with phezu 10,000 ongakhetha yokuhlala, i Swiss Alps ziindawo ezintle zokurenta iholide eYurophu. Uluhlu lweentaba zeSwitzerland ezintle, inikeza iimbono ezilungileyo, imbonakalo-mhlaba, Iindlela, imbonakalo yelizwe, iipropati eziqeshisayo zeeholide, oko kuyakuwisa umhlathi wakho.
Enye yezona zinto zibalaseleyo malunga nokurenta kweeholide kwiiSwiss Alps kukuba kukho ikhaya layo nayiphi na incasa kunye neqela. Kwiintsapho, amaqela abahlobo, kunye nebhafu eshushu yangaphandle, Iitshishini, ukubonwa kwentaba okanye kwentlambo - iiAlps zaseSwitzerland zahlukahlukene kangangokuba zezona ndawo zilungele irente yeholide.
ke, ngoku kufuneka ukhethe phakathi iindawo ezingaphandle kwendlela njengoLucerne, okanye intlambo yeengxangxasi, ichibi iMaggiore okanye iimbono zeentaba kuhambo lwakho lokuya kwiholide engalibalekiyo.
Chalets, Iikhabhathi zamaplanga, izindlu, okanye amagumbi.
ukusuka $92 indlu yokuhlala $265 ubusuku ngabunye kwigumbi lokuhlala labucala okanye indlu eneembono zamachibi.
5. Iindawo ezimangalisayo zokuqasha iiholide eFrance
IFransi yindawo emangalisayo yokurenta iholide eYurophu. Ngeendawo ezininzi ezintle neziguquguqukayo, Sifumanise ukuba kunzima ukukhetha indawo enye kuphela eyoyikisayo yokurenta iholide yakho elandelayo yaseFrance.
Umzekelo, IBiarritz ineelwandle ezintle kakhulu, ngexa intlambo yaseDordogne ibonelela ngeentaba ezimangalisayo kunye nokujonga imilambo.
Nokuba yeyiphi indawo yokurenta iholide oyikhethayo, irente yakho emangalisayo yokurenta iya kuxhotyiswa ngokupheleleyo, neegadi ezintle, nakwiindawo ezintle zaseFrance.
EBrittany, uya kufumana iinqaba zokurenta kweeholide, okanye indlu encinci enendlela yabucala kunxweme oluhle.
$75 – $145 ubusuku ngalinye
I-Nantes kukhenketho ngoololiwe
ULille ukuya kuKhenketho ngoLoliwe
ILille eya eParis ngoLoliwe
6. Indawo eyoQeshisayo yokuHlala kwiRiphabhlikhi yaseCzech: Bohemia
I-Bohemian Switzerland yenye yeengingqi ezintle eYurophu. Enkosi kwiintaba zesanti ezimangalisayo kunye neembono zomlambo iElbe, ICzech Switzerland yiparadesi yeholide. Ngaloo ndlela, yindawo entle yokurenta iholide eYurophu.
Le ndawo inika umbono we-epic, Iindlela ezininzi zokunyuka intaba, usapho Amabala epikiniki, kunye nomlambo wokuqubha kuwo.
Amakhaya anamhlanje asondele kwindalo yasendle, nobomi be 100 iminyaka ezizigidi. Idolophu yaseDecin yindawo entle yokurenta ikhaya lakho kude nekhaya.
$90 – $150 ubusuku ngalinye
7. Indawo eyoQeshisayo yokuHlala eAustria: ISyria
Ifumaneka kumazantsi mpuma e-Austria, inkangeleko yeStyrian Alpine yenye yezona zintle eOstriya. ngoko ke, ISytria yindawo entle yokurenta iholide eYurophu: izimvo, umkhenkce omkhenkce, amadlelo aluhlaza, kunye nendalo ebukekayo.
Ukongeza kwiimbono ezintle kunye neendlela zokuhamba, eSytria, uya kuphumla ngokupheleleyo emva kotyelelo ku imithombo yobushushu yendalo. okukanye, enkosi kwimithi emininzi yama-apile nakwizidiliya, ungabeka intloko, okanye wonwabe ngepikniki emnandi.
Iikhabhathi zamaplanga, Villas kunye namachibi, Iitshishini.
$65 – $200 ubusuku ngalinye
8. Indawo eyoRentayo yokuHlala: London
ILondon yenye yezona ndawo zintle kakhulu zokurenta iholide eYurophu kuba sisixeko esinokhetho olungenasiphelo. Apha uya kufumana iindawo ezikhethekileyo kunye ezintle, ngezakhiwo ezahlukeneyo, isiko, kunye neentshukumo. Notting Hill uyaphupha, I-Hampstead Heath yendabuko kwaye iyaqhakaza, kwaye iKensington ilungile kwaye ihamba kakuhle. Le yimizekelo embalwa yeendawo ezoyikekayo zokubhukisha indawo yakho elandelayo yeholide kude nekhaya.
Ngaphezu, ILondon ibonelela ngezinto ezininzi, iimarike, olondolozo lwembali, kunye neepaki zazo naziphi na incasa kunye nohlobo lweholide. ngoko ke, ILondon iya kuba yimpumelelo epheleleyo Iholide losapho eYurophu nabantwana: Iipaki zokuzonwabisa, iivenkile eziphambili zekhekhe, kunye noHarry Potter kunjalo.
Ukuqeshiswa kwegumbi kumbindi weLondon, namakhaya angaphandle kweLondon, depending on the zone.
9. Indawo eyoQeshisayo yokuHlala eJamani: eBavaria
IBavaria yenye yezona ndawo zintle eJamani, ngakumbi entwasahlobo. Ukusuka kwiiAlps ukuya kumlambo iDanube, umculo, kunye nezidlo zaseBavaria, ngezinto ezininzi zokwenza, a 10-uhambo losuku eBavaria isenokungonelisi ukonwabela yonke into enale ndawo intle kangaka.
Ngaloo ndlela, Kuya kufuneka ucwangcise kwangaphambili ngeholide yakho eBavaria. Kuba iBavaria yenye yeendawo zokuthanda iiholide eJamani, kubahlali nabakhenkethi, Iholide eziqeshisayo zihlala zibhukishwa kwiinyanga ezimbalwa kwangaphambili. Ukongeza kokubhukisha indawo yokuhlala, ukwenza olona holide lwakho lwaseBavaria, uphando kwaye wenze uluhlu lwezinto eziphezulu kunye nemisebenzi omele uyenze, kwaye ube nohambo ngokubanzi.
Iindawo zokuhlala, zokuhlala, nezindlu.
$80- $350 ubusuku ngalinye
10. Indawo eyoQeshisayo yokuHlala eItali: Lake Como
ILake Como yenye yezona ndawo zidumileyo zeholide e-Itali. Ngaphandle kwenyani inokuba nokuxinana okuninzi ngexesha lasehlotyeni, ichibi eliphefumulayo kunye neembono zeentaba, nomoya opholileyo, beka iLake Como kwi 10 iindawo ezininzi eyoyikisayo irente eYurophu.
Elona xesha lilungileyo loku iholide eLake Como kuphakathi kuka-Matshi ukuya ku-Novemba, xa uJulayi-Agasti ezona nyanga zishushu nezixakekileyo. ke, kubaluleke kakhulu ukuba wenze uphando lwakho kwangaphambili. ngoko ke, eyona nto ibalulekileyo kukujonga indawo yokuhlala kunye neenzuzo kunye neengozi zokubhukisha iholide echibini, ngayo nayiphi na indawo enyakeni.
Villas eNtofontofo, zokuhlala, Iitshishini, kunye nezindlu zokuhlala.
$40 ngemini ukuya $500 ngeveki
Apha Gcina A Isitimela, siya konwaba ukunceda ukucwangcisa uhambo oluya e 10 iindawo ezininzi eyoyikisayo irente eYurophu. Uhambo ngololiwe oluya kwindawo ekusa kuyo kunye nekhaya elinamaphupha kude nekhaya yeyona ndlela ikhawulezayo nefikelelekayo yokuhamba.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog "1o Iindawo eziMangalisayo zokuHlala kwiYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fvacation-rental-places-europe%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)